July 2015 - မောင်ပေါက် ( Maung Pauk )
Win Hlaing at 8:38:00 PM 0
ဒီစာအုပ်ကတော့ IELTS စာမေးပွဲဝင်ဖို့ ကြိုးစားနေတဲ့ကျောင်းသားတွေထဲမှာမှယ..Grammar အားနည်းတယ်..Grammar ကိုပိုလေ့လာချင်တယ်ဆိုတဲ့ ကျောင်းသားတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်....IELTS စာမေးပွဲဝင်မယ့်ကျောင်းသားတွေသာမက အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအားလုံးအတွက်သင့်တော်ပါတယ်..
ကနေပြီး..English Learning CD နှင့်စာအုပ်များကို နေ့စဉ်တင်ပေးနေပါသည်...
ဖုန်းထဲမှာအသံတွေကို Record လုပ်ပေးမယ်-Call Recorder 2.0.32 for Android
Win Hlaing at 8:34:00 PM 0
Android ဖုန်း နှင့်Tablet ကိုင်းဆောင်ထားတဲ့ဘော်ဒါတွေအတွက် အသံဖိုင်းများစွာ Record လုပ်ပေးမယ် apk လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်။ ဖုန်း call အ၀င်ရော ၊ အထွက်ရော အသံကြည်ကြည်လင်လင်နဲ့ record လုပ်ပေးထားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Record လုပ်ချင်းတယ်ဘော်ဒါတွေအတွက် အောက်ကလင့်ခ် ဒေါင်းနိုင်ပါတယ်ဗျာ။Android version 2.2 နှင့်အထက်ရှိတဲ့ ဖုန်းအားလုံးမှာ ဒီဆော့ဝဲလေးကိုအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဗျာ။ ဒီကောင်းလေး၏ ဖိုင်ဆိုဒ်လေးကတော့ 16.03 ရှိပါတယ်။
Than Toe Aung at 1:01:00 PM 0
facebook သုံးတဲ့သူများအတွက် updater Version-Facebook v39.0.0.36.238 Apk
Win Hlaing at 9:46:00 AM 0
Thiha Htike at 9:09:00 AM 0
အနီးဆုံးမွေးနေ့ရောက်မယ့်သူတွေ စသဖြင့် ဖေ့ဘုတ်နှင့်ပတ်သက်သမျှကို ဒီဆော့ဝဲလေးထဲမှာ အကုန်ကြည့်နိုင်ပါတယ် အားလုံးအသုံးဝင်မယ်ထင်လို့တင်ပေးလိုက်ပါတယ်
Mobile ဖုန်းများဈေးသက်သာစွာပြင်ဆင်ပေးနေပါပြီ။ ။
Thiha Htike at 9:08:00 AM 0
ဖုန်း နဲ့ sms မှာ ဖုန်းလာလာ မလာလာ ဖုန်း နဲ့ sms ကို ခေါ်ထား မခေါ်ထားထား အဝင်အထွက် ရှိနေအောင် လုပ်ပေးမယ့် Fake Call & SMS Apk လေးတစ်ခုပါ အိမ်မှာ နေပီးတော့ ရည်းစားနဲ့ စကားပြောပီးတော့ ဖုန်းဘေ ကုန်နေတဲ့ သူတွေ ဒီကောင်လေး သုံးပီးတော့ ဘယ်သူ့ကို ခေါ်ထားတာပါ ဘာညာ လုပ်လို့ရတာပါပါ့ လိုအပ်သူများ ယူထားလိုက်နော်
Thiha Htike at 1:22:00 PM 0
Than Toe Aung at 10:53:00 AM 0
Q. ကျွန်တော်ဟာဖုန်းကို လွန်လွန်ကဲကဲအသုံးပြုမိနေတယ်လို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကို သံသယရှိနေပါတယ်။ ဖုန်းကိုအစွဲလွန်နေတယ်လို့ ပြသနေတဲ့ လက္ခဏာတွေအကြောင်း ပညာရှင်တွေက ပြောထားတာ ရှိသလားသိချင်ပါတယ်။
A. စမတ်ဖုန်းတွေက ဘ၀ရဲ့အရေးကြီးတဲ့ အစိတ်အပိုင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်အသုံးပြုမှုကို ကန့် သတ်သင့်တယ်ဆိုတဲ့အချက်က ထင်ရှားလာပါတယ်။ ဖုန်းကို လွန်လွန်ကဲကဲ အသုံးပြုတာဟာလူမှုရေးနဲ့ ကျန်းမာရေး ဖရိုဖရဲ ဖြစ်စေနိုင်တယ်လို့ ယုံကြည်စရာဖြစ်လာတယ်။ အချိန်မလွန်ခင် ဖုန်းကို စွဲလမ်းနေပြီလားဆိုတာ သိရအောင် အောက်ပါအချက် (၁၀) ချက်နဲ့ တိုက်ဆိုင်စစ်ဆေး ကြည့်နိုင်ပါတယ်။
ဖုန်းစွဲလမ်းနေတဲ့သူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ဖုန်းကို နေရာအထား မှားပြီးဆိုတာရှာဖွေတွေ့ရှိတာနဲ့ ထိတ်ထိတ်ပျာပျာဖြစ်သွားကြတယ်။ ဖြစ်နိုင်သမျှ နေရာတိုင်းမှာလိုက်ရှာပြီး မတွေ့မချင်းရပ်နားမှာမဟုတ်ပါဘူး။ ရှာမတွေ့ဘူးဆိုရင် စိတ်ဓာတ်ကျနေပြီး အခြားသူတွေနဲ့ရက် အနည်းငယ်ကြာအောင် ခပ်ခွါခွါနေပါလိမ့်မယ်။
သူတို့က ဖုန်းကိုအိမ်မှာချန်ထားခဲ့မိရင် စိတ်ထဲဟာတာတာခံစားနေရမယ်။ အရေးကြီးတဲ့ကလေးငယ်ကို အစောင့်အရှောက်မရှိဘဲ အိမ်မှာချန်ထားခဲ့ရသလို ခံစားရမယ်။ သူတို့က အိမ်ကိုပြန်ဖုန်းကို ကောက်ယူပြီး notification တွေစစ်ဆေးဖို့ မစောင့်နိုင်အောင် ဖြစ်နေနိုင်တယ်။
အိပ်ရာကနိုးလာတာနဲ့ ဖုန်းကိုဘယ် လောက်မြန်ဆန်စွာနဲ့ စစ်ဆေးပါသလဲ။ လေ့လာ မှုအချို့က လူအများစုဟာ အိပ်ရာကနိုးပြီး တစ်နာရီအတွင်း သူတို့ဖုန်းကိုစစ်ဆေးကြတယ် လို့ဆိုပါတယ်။ အချို့ကိစ္စတွေမှာ လူတွေက အိပ် ရာကနေထဖို့ မနည်းလုပ်နေရတဲ့အချိန်မှာ အိပ်ချင်မူးတူးနဲ့ ဖုန်းကိုစစ်ဆေးကြတာတွေ့ရပါ တယ်။
အိမ်သာတက်တဲ့အခါ သတင်းစာအစား ဖုန်းကိုယူသွားပါသလား။ ဒီအချက်က အထက်ကိစ္စ အပေါ် အခြေခံပေမယ့် အနည်းငယ်ကွာခြားပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ထောက်ပြလိုတဲ့အချက်က သတင်းအတွက် တကယ့်သတင်းစာအစား ဖုန်းနဲ့တက်ဘလက်တွေ အသုံးပြု တာဖြစ်ပါတယ်။
ရေချိုးတဲ့နေရာ ဖုန်းကိုယူသွားပါသလား။ လူတွေက ရေလုံ water-proof cover တွေသုံးပြီး ဖုန်းတွေကို ရေပန်းဒါမှမဟုတ် ရေချိုးကန်ထဲ ယူဆောင်သွားကာ chatting နဲ့ အလားတူဆင်တူတာတွေ လုပ်တဲ့ကိစ္စတွေရှိနေပါတယ်။
Notification တွေအတွက် ဖုန်းကိုမကြာခဏ စစ်ဆေးနေပြီး ဘာတစ်ခုမှ မတွေ့ရတဲ့အခါ စိတ်ပျက်သွားတာ မျိုးဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ လူတစ်ယောက်က ဖုန်းကိုလွန်လွန်ကဲကဲ စွဲနေပြီဆိုတာပြောနိုင်တဲ့ လက္ခဏာများစွာထဲကတစ်ခုက user ဟာ အပြင်မှာ ဘာပဲလုပ်နေနေ သူတို့ရဲ့ဖုန်းတွေနဲ့ အဆက်မပြတ်တုံ့ပြန် ဆက်သွယ်မှု လိုချင်နေတာပါပဲ။
ဒီတစ်ခုက အထက်ကအချက်ကိုချဲ့ထွင်ထားတာပါ။ သင်ဟာ လက်ရှိအချိန်မှာ စကားပြောစရာသက်ရှိထင်ရှား လူတစ်ယောက် ရှေ့မှာရှိနေတာတောင် texting and chatting တွေလုပ်ဆောင်နေ တုန်းပဲလား။ အခြားတနည်းပြောရရင် တကယ့်ပြင်ပလူတစ်ယောက်နဲ့ စကားပြောနေတဲ့အထိ ဖုန်းကိုဆက်ပြီး အသုံးပြုနေတုန်းပဲလား။
ယခုအခါမှာ ဖုန်းတွေနဲ့ယှဉ်ရင် ကွန်ပျူတာသုံးတဲ့အချိန်ပို နည်းလာသလား။ လူတွေကဖုန်းကို စွဲလမ်းလာတဲ့အခါ သူတို့က အရာ ကိစ်္စအားလုံးနီးပါးအတွက် ပုံမှန်ကွန်ပျူတာကနေ ဖုန်းတွေနဲ့တက်ဘ လက်တွေဆီက တဖြည်းဖြည်းရွှေ့ပြောင်းသုံးစွဲလာကြတယ်။ ၀က်ဘ် ဆိုက်တစ်ခုကို လည်ပတ်ကြည့်ရှုဖို့၊ မေးလ်စစ်တာ၊ chatting ပြော တာတွေနဲ့ အခြားကိစ်္စတွေအတွက်ဖြစ်ပါတယ်။ ပုံမှန်ကွန်ပျူတာအသုံး ချမှုအချိန် ရုတ်တရက်ကြီးကြီးမားမားကျဆင်းသွားမှုနဲ့ ဖုန်းတွေကို သုံးစွဲတဲ့အချိန်ကြာမြင့်လာမှုအပေါင်းအစပ်က ဖုန်းစွဲလမ်းမှုကိုညွန်ပြ နေပါတယ်။
Chat လုပ်တာ၊ စကားပြောတာ၊ Facebook လို social site တွေကြည့်တာတွေနဲ့ ညဉ့်နက်သွားတာမျိုးကြိမ်ရေဘယ်လောက် များများဖြစ်ဖူးပါသလဲ။ လက်ထဲမှာဖုန်းကိုင်းရင် ပြန်နိုးလာတာမျိုးဖြစ် ဖူးပါသလား။
နောက်ဆုံးအချက်ကတော့ နေ့တစ်နေ့ရဲ့အဆုံးမှာ ဘယ်လို ကုန်ဆုံးဖို့နှစ်သက်ပါလဲ။ ဖုန်းပေါ်မှာတစ်ခုခုလုပ်ရင်းအိပ်ရာထဲမှာ နေဖို့လား။ ဒါမှမဟုတ် မိသားစုနဲ့ တန်ဖိုးရှိတဲ့အချိန်တွေ ကုန်ဆုံးစေဖို့လား။
Windows 10 တွင်ပါဝင်လာမည့် အကောင်းဆုံး feature သစ်များ
Than Toe Aung at 12:09:00 AM 0
ဇူလိုင်လ ၂၉ ရက်တွင် ထွက်ရှိလာမည့် Windows 10 တွင် Microsoft သည် ပြောင်းလဲမှုများစွာ ပြုလုပ်ထားသည်။ Windows သည် Microsoft အတွက် အရေးပါသောအပြောင်းအလဲတစ်ရပ် ဖြစ်ပြီး ယခင် desktop နှင့်မိုဘိုင်း အတွေ့အကြုံများ ပေါင်းစည်းထားသော Windows 8.1 ကို အတိတ်တွင် ထားခဲ့နိုင်မည့် အခွင့်အရေးတစ်ခု ဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါ အချက်များမှာ Windows 10 တွင် အကြီးအကျယ်ပြောင်းလဲမှု ပြုလုပ်ထားသည့် အချက်များ ဖြစ်သည်။
Microsoft ၏ တစ်ကိုယ်ရေ digital assistant ဖြစ်သော Cortana သည် Windows ဖုန်းများတွင်စတင် ပါဝင်လာသည်။ Windows 10 တွင် တိုးချဲ့ထားသော feature များနှင့်အတူ PC အတွက် Cortana ကို ထောက်ပံ့ပေးထားသည်။ Cortana သည် Siri နှင့် Google Now ကဲ့သို့ ထုတ်ကုန်များတွင် ညွှန်ကြားမှုကို ဖြေကြားခြင်းနှင့် တာဝန်များကို လုပ်ဆောင်နိုင်သည်။ ထို့အပြင် Cortana သည် ရှာဖွေမှုများပြုလုပ်သည့် လုပ်ဆောင်ချက်နှင့် အနီးစပ်ဆုံး ရှာဖွေမှုများ ပြုလုပ်နိုင်ပြီး ကုမ္ပဏီမှ ထောက်ပံ့ထားသော ဘာသာစကားဖြင့် ဖြေကြားပေးကာ ဖိုင်များကို ရှာဖွေပေးခြင်း သို့မဟုတ် မှာကြားချက်ကို ဖတ်ပြခြင်းတို့ ပြုလုပ်ပေးနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူက အီးမေးလ် သို့မဟုတ် နှုတ်ဖြင့် ရာသီဥတုအခြေအနေမေးမြန်းသည့်အခါ ရာသီဥတု အစီရင်ခံစာကို ပြသပေးမည် ဖြစ်သည်။
Apple ၏ OSX တွင် virtual desktop များ အသုံးပြုသကဲ့သို့ပင် Windows 10 ၌ desktop များစွာဖန်တီးပြီး app များရွေ့ပြောင်း အသုံးပြုနိုင်သည်။ ထို့ကြောင့် သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် app နှင့် ပရိုဂရမ်များစွာကို ဖွင့်ရန် virtual desktop များကို အသုံးပြုနိုင်ပြီ ဖြစ်သည်။
Windows app များကို PC, tablet အပြင် ဖုန်းနှင့် Xbox One ထုတ်ကုန်အမျိုးမျိုးတွင် အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ သုံးစွဲသူများတွင် Windows အမှတ်တံဆိပ် ထုတ်ကုန်များရှိပါက hardware များအားလုံးတွင် အဓိက app တစ်ခုကို အသုံးပြုထားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Windows 10 တွင် အသုံးပြုသည့် ထုတ်ကုန်ပေါ်မူတည်၍ app များကို အလိုအလျောက် ချိန်ညှိပေးနိုင်သည်။ သုံးစွဲသူများက two-in-one hybrid ကွန်ပျူတာ အသုံးပြုရာတွင် Desktop mode အတွင်း Microsoft Word အသုံးပြုနေစဉ် Tablet mode သို့ ချက်ချင်းပြောင်းလဲလိုက်လျှင် ၎င်း app သည် မျက်နှာပြင်ပြည့် ချိန်ညှိပေးကာ touch ဖြင့်အသုံးပြုနိုင်ရန် ခလုတ်များကိုလည်း ပြောင်းလဲပေးသွားမည် ဖြစ်သည်။
Windows 10 ကို ဖုန်း၊ ကွန်ပျူတာနှင့် tablet များတွင် အဓိက operating system တစ်ခုတည်းအဖြစ် အသုံးပြုနိုင်သည်။ Continuum ၏ အကူအညီဖြင့် desktop ကဲ့သို့ Windows 10 ဖုန်း ကို ကီးဘုတ်၊ mouse နှင့် display နှင့်ချိတ်ဆက်၍ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ထိုသို့အသုံးပြုရန် ထုတ်ကုန် ကန့်သတ်ချက်များ ရှိနေသော်လည်း Word သို့မဟုတ် Outlook ကဲ့သို့ Windows app များကို အပြည့်အဝ အသုံးပြုနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
သုံးစွဲသူများအနေဖြင့် ဖုန်းကို desktop ကဲ့သို့ အသုံးပြုစဉ် text message များဝင်လာသည့်အခါ windows desktop app များမှတစ်ဆင့် ဖုန်းပေါ်တွင် clipboard သို့ ကူးယူနိုင်မည် ဖြစ်သည်။
Edge သည်နှစ်သက်ရာ content အကြောင်းအရာကို အပြန်အလှန်ဖလှယ်နိုင်သည့် နည်းလမ်းများနှင့် အကြောင်းအရာ များကို ဖတ်ရှုနိုင်ရန် အကြီးအကျယ်ပြုလုပ်ထားသည်။ ၎င်း browser ကိုရိုးရှင်းသော ဒီဇိုင်းဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။
Microsoft အနေဖြင့် browser အတွင်း Cortana ကိုထည့်သွင်းထားပြီး စကားလုံးအနက်များ ရှာဖွေခြင်း၊ မြေပုံတွင် နီးစပ်ရာ အိမ်လိပ်စာရှာဖွေခြင်း သို့မဟုတ် ကျော်ကြားသူများ၏ ယေဘုယျအချက်အလက်များကို ရှာဖွေခြင်းတို့ ပြုလုပ်နိုင်သည်။ စာသားကို highlight ပြုလုပ်ကာ right click ဖြင့်ထောက်၍ အချက်အလက် များကို “Ask Cortana” ကိုရွေးချယ်ကာ copy နှင့် paste ပြုလုပ်၍ လွယ်ကူစွာ ရှာဖွေနိုင်သည်။
ကျွမ်းကျင်အဆင့်ရှိ ကွန်ပျူတာသုံးစွဲသူများသည် ဝက်ဘ်တွင် စီမံခန့်ခွဲမှုများ အဆင့်မြှင့်တင် ပြုလုပ်နိုင်ရန် ဝက်ဘ် extension များအသုံးပြုကြသည်။ သို့ရာတွင် Edge သည် ၎င်း extension တစ်ချို့ကို ဖယ်ရှားရန် Annotations နှင့် Reading Lists feature များထည့်သွင်းပေးထားသည်။ Annotation သည်ဝက်ဘ်စာမျက်နှာ ၏ screenshot ကိုမှတ်သားပေးပြီး အခြား Windows 10 သုံးစွဲသူများကို ဝေမျှရန် စာသားများ highlight ပြုလုပ်ခြင်း၊ ပုံဆွဲခြင်း သို့မဟုတ် ရေးသားထားသော မှတ်စုများကို ပေးပို့နိုင်သည်။ Evernote သို့မဟုတ် Pocket တို့ကဲ့သို့ ဆောင်းပါးများကို အချိန်အတန်ကြာမှ ပြန်လည်ဖတ်ရှုရန် Reading List feature ကိုလည်း အသုံးပြုနိုင်သည်။
Edge ၏အကြီးမားဆုံး feature များမှာ Reading View ဖြစ်ပြီး ကြော်ငြာများ သို့မဟုတ် ဗွီဒီယိုများကဲ့သို့ ဝက်ဘ်စာမျက်နှာတွင် ပိတ်ပင်ထားသည့် အရာများကို ဖယ်ရှားပေးနိုင်သည်။
Windows 10 သည် Xbox One အပါအဝင် Microsoft ထုတ်ကုန်များအားလုံးသို့ ထောက်ပံ့မှုပေးထားသည်။ ဂိမ်မာအများစုအနေဖြင့် အသုံးပြုမည့် feature သစ်များသည် OS သစ်တွင် ပါဝင်လာသည်။
ထုတ်ကုန်များကို Windows 10 အထိအဆင့်မြှင့်တင်ပြီးလျှင် Windows 10 ကွန်ပျူတာ သို့မဟုတ် tablet များသို့ Xbox One ဂိမ်းများ ပြန်လည်ထုတ်လွှင့်၍ ကစားနိုင်သည်။
Windows 10 အသုံးပြုထားသော Xbox နှင့် ကွန်ပျူတာများသည် platform တစ်ခုစီမှနေ၍ ဂိမ်းတစ်ခု တည်းကို ကစားနိုင်မည် ဖြစ်သည်။ ၎င်း feature သည် မည်သည့်ဂိမ်းကိုမဆို ထောက်ပံ့ပေးထားခြင်း မရှိသော်လည်း Montiga ကဲ့သို့ developer များမှ ထုတ်လုပ်သော Gigantic ဂိမ်းနှင့် ပူးပေါင်းမှုပြုလုပ်ထားသည်။
ထို့အပြင် Microsoft သည် Xbox app သစ်တွင် မိတ်ဆွေစာရင်းကို စီမံခန့်ခွဲခြင်း၊ ဂိမ်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့် အချက်အလက်ခြေရာခံခြင်း သို့မဟုတ် ကွန်ပျူတာမှ ဂိမ်းဗွီဒီယိုများ ကြည့်ရှုခြင်းတို့ ထည့်သွင်း ထောက်ပံ့ထားသည်။
Windows 10 ၏ feature များအနက် အကောင်းဆုံးတစ်ခုမှာ ယခင်က ထွက်ရှိခဲ့ဖူးသော OS အများစုတွင် ပါဝင်ခဲ့သည့် Start Menu ပါဝင်လာခြင်း ဖြစ်သည်။ Microsoft သည် Windows 10 တွင်ပြင်ဆင်မှု အနည်းငယ်ပြုလုပ်ထားသော Start Menu ကိုပြန်လည် ထည့်သွင်းခဲ့သည်။
Microsoft သည် Start Menu ကို Windows 8 လုပ်ဆောင်ချက်များနှင့်အတူ Windows7မှ ရိုးရှင်းသော Start Menu ကိုပေါင်းစပ်၍ ဒီဇိုင်းသစ်ဖြင့် ဖန်တီးထားသည်။ Start Menu တွင် Windows 8 ၏ Live Tiles များ ဆက်လက် ပါဝင်လာသော်လည်း ၎င်းတို့သည် ပိုမိုသေးငယ်ကာ ကဏ္ဍတစ်ခုအဖြစ် ပါဝင်လာသည်။ ၎င်း၏ ဘယ်ဘက်ခြမ်းတွင် အသုံးအများဆုံး app နှင့် Setting ကဲ့သို့အရာအပြင် File Explorer ကိုပြပေးမည် ဖြစ်သည်။ အဆိုပါ Start Menu ကို စိတ်ကြိုက်ပြင်ဆင်နိုင်ပြီး အရွယ်အစားကို ပြောင်းလဲနိုင်ကာ နှစ်သက်သော app များကို pin ပြုလုပ်ထားခြင်းနှင့် desktop wallpaper အလိုက်အရောင်များလည်း ပြောင်းလဲနိုင်သည်။
Ref: Reviewed internetjournal
Win Hlaing at 9:42:00 PM 0
English Dictionary တွေထဲမှာ Offline အသံထွက်နားထောင်လို့ရတာ ရှားပါတယ်...အကုန်လုံးနီးပါးက ကော်နချိန်..ရှိမှရတတ်ပါမယ်..ဒါပေမဲ့ ဒီ Offline Dictionary ကတော့ ကော်နချိန်မရှိလဲ အသံထွက်ကို နားထောင်လို့ရပါတယ်...အဓိပ္ပါယ်ဖွင့်ရှိချက်တွေကလည်း...ကောင်းပါတယ်..Android ဖုန်းသုံးသူတွေ အရမ်းထည့်ထားသင့်တဲ့ Dictionary တစ်ခု memory ကလည်း 9mb လောက်ပဲဆိုတော့ ဒေါင်းလုပ်ဆွဲသူတွေအတွက်..မခက်ခဲဘူးပေါ့ဗျာ..စမ်းထားပြီးသားပါ...အားလုံးအကုန် အလုပ်လုပ်ပါတယ်...
Offline Dictionary နှင့် Grammar, Idioms များကိုလေ့လာနိုင်သည့် apk နော် အရမ်းမိုက်
Win Hlaing at 9:41:00 PM 0
အရင်တစ်ခါတင်ပေးလိုက်တဲ့ Offline mode Dictionary ကတော့ အဘိဓာန်သက်သက်ပဲလေ...သဒ္ဒါတွေ Idioms တွေ phrase တွေကိုရှင်းပြတဲ့ ကဏ္ဍမပါဝင်ဘူး..အခုတင်ပေးလိုက်တဲ့ English Dictionary-Offline ကတော့ Grammar, Phrase နှင့် Idioms တွေကိုတစ်ထိုင်တည်းမှာ သင်လို့ရတော့ အရမ်းမိုက်တာပေါ့....အင်္ဂလိပ်စာလေ့လာနေသူတွေအတွက် အရမ်းအဖိုးတန်မယ်ဆိုတာ..လုံးဝသေချာပါတယ်..
English Tense တွေကိုရှင်းပြချက်..
ပြီးတော့..သဒ္ဒါဆိုင်ရာ ရှင်းပြချက်တွေ အပြည့်ပါတဲ့ ဒီ apps လေးကိုဒေါင်းယူထားလိုက်ပါ..
SERVICE သမား တစ်ယောက်အနေနဲ့ ANDRIOD နှင့်ပတ်သက်၍ သင်ဒါတွေ သိပြီး ပီလာ???
Than Toe Aung at 5:27:00 PM 0
Android ကိုစတင်လေ့လာဖို့ကျိုးစားနေသူတွေအနေနဲ့ အများပြောနေကြတဲ့Bootloader , Firmware, ADB , Stock ROMs, Custom ROMs, OS Kernel,ClockworkMod, Flashing , Rooting , Baseband စသဖြင့် စာလုံး အထူးအဆန်းတွေခြည်းတွေ့ရလို့ လေ့လာချင်စိတ်ကုန် သွားတတ်သလို့၊ တစ်လုံး စီနဲ့သူတို့ရဲ့ သီးသန့် အလုပ်လုပ်ပုံကို အတိအကျ မသိရင် နာမည်သာခေါ်နေပေမယ့်အနှစ်သာရ မဲ့နေတတ်ပါတယ်၊ တကယ်လေ့လာလိုသူတွေအနေနဲ့ လဲ တစ်ခုစီရဲ့အဓီပါယ်နဲ့ အသုံးဝင်ပုံ အသေးစိတ်အလုပ်လုပ်ပုံတို့ကို သေချာ သိကိုသိထားရပါမယ်၊ ဒီပို့စ်မှာ အထက်က စာလုံးတွေအကြောင်း ရှင်းသွားပေးပါမယ်၊တကယ်ပညာရှင်အဆင့် တက်လှမ်းချင်သူတွေအတွက် Open Source ဖြစ်တဲ့ Android ကမည်သူမဆို ဒေါင်းယူနိုင်ပီး ကြိုက်သလို ဖြတ်နိုင် ပြင်နိုင် ပါတယ်၊စိတ်ကြိုက်ပြောင်းနိုင် မိမိနဲ့ အသင့်တော်ဆုံး ဖြစ်တဲ့ Systemတစ်ခုဖြစ်သွားတဲ့ အထိ ပြုပြင်ယူလို့ရပါတယ်၊Bootloader ဆိုတာဘာလဲBootloader ဆိုတာက Operation System မစတင်ခင် အလုပ်လုပ်တဲ့ Codeအစိတ်အပိုင်းလေးကိုခေါ်ပါတယ်၊ Bootloader ထဲမှာ OS kernal ကိုစတင်အလုပ်လုပ်အောင် ခေါ်မယ် ညွန်ကြားချက်တွေပါပါတယ်၊ Bootloader က InternalMemory ထဲမှာရှိတဲ့ Paratition တွေအားလုံးက ရဲ့ ပထမဆုံး Partition မှာတည်ရှိမှာဖြစ်ပီး အခြား Partitions တွေအားလုံးကို သွားမယ့် Check Pointပါပဲ၊Bootloader ဘယ်လိုအလုပ်လုပ်တာလဲPower စဖွင့်တာနဲ့ ROM ထဲမှာရှိတဲ့ Boot ROM Code က စပီးအလုပ်လုပ်ပါတယ်၊ပီးရင် Bootloader လို့ခေါ်တဲ့ Boot Strap Firmware ကို နိုးမယ်၊ BootStrap Firmware ထဲမှာ MBR and GRUB/LILO တို့ပါဝင်တယ်၊ Bootloaderအလုပ်စပီဆိုတာနဲ့ init.S ဖိုင် စအလုပ်လုပ်တယ် ၊ အရင် ဆုံး BSS segment ကို0 တန်ဖိုးရောက်သွားအောင်ရှင်းတယ်၊ ပီးရင် main.c ဖိုင်ကို စခေါ်မယ်၊ main.cဖိုင် စ အလုပ်လုပ်တာနဲ့ hardware အစိတ်အပိုင်းတွေဖြစ်တဲ့ clocks, board,keypad, console တို့ကိုစတင်စေမယ်၊ ပီးရင် Linux Tags ကိုဖန်တီးပီး LinuxKernel image ကို Memory ကနေ ၀င်တင်မယ်၊Botloader ရွေးချယ်မှူBootloader က Phone မှာပါဝင်တဲ့ အခြား မည်သည့် software မဆိုရဲ့ အဦးဆုံးစတင်တဲ့ အတွက် မှန်ကန်တဲ့ processor ကိုအသုံးပြုဖို့အလွန်အရေးကြီးလှပါတယ်၊ Android OS က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက်ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေက သူတို့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ဖုန်း Hardware နဲ့ကိုက်ညီတဲ့ Bootloader version ကို Develop လုပ်ထားကြပါတယ်၊ Androidဖုန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ Bootloader တွေကို အမြဲတမ်း Locked ချထားပါတယ်၊ဒီလိုလုပ်ထားတာကတော့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီတွေကို သူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ဖုန်းကိုသူတို့ထုတ်လုပ်တဲ့ OS version နဲ့ ပဲတွဲသုံးစေချင်လို့ပါ၊ Bootloader ကိုLocked လုပ်ထားရင် Custom ROM install လုပ်လို့မရပါဘူး၊ ဒါကြောင့် CustomROM Install လုပ်လိုရင် Bootloader ကို အရင် Unlock လုပ်ရပါတယ်၊Kernel ဆိုတာဘာလဲKernel ဆိုတာက Android တစ်ခုထဲမှာသာလျှင်ရှိတာ မဟုတ်ပဲIOS,MacOS,Window,BlackBerry's QNX တို့မှာလဲရှိပါတယ်၊ High LevelOperation Systems အားလုံးမှာ Kernel တစ်ခုတော့ ပါဝင်ပါတယ်၊ ခု ပြောမှာကAndroid အကြောင်းဆိုတော့ Linux Kernel ကိုပဲ ဦးတည်ပီးပြောသွားပါမယ်၊Android သုံးသမျှ ပစ္စည်းတွေက Linux Kernel ကိုသုံးကြပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် LinuxOperation System က သုံးတဲ့ Kernel နဲ့တော့ တထပ်တည်းမတူပါဘူး၊ AndroidKernel မှာ Android အတွက် သီးသန့် Build-in code တွေပါနေပါတယ်၊ဒါ့ကြောင့်ပဲ Developers တွေနဲ့ hackers တွေအတွက် Android Versionsအသစ်တွေကို Android ဖုန်း အဟောင်းတွေမှာ ထည့်သွင်းပီး အားလုံး အဆင်ပြေပြေအလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ အတော့ကိုစောင့်ရပါတယ်၊ Gingerbred kernel အတွက်သုံးတဲ့ drivers တွေက Ice Cream Sandwichkernel အတွက် အလုပ်လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး၊ ဒီကစ္စက လဲ အရေးကြီးပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓီက အလုပ်က Hardwareကို ထိန်းချုပ်ဖို့ တာဝန်ကိုယူထားလို့ပါ၊ kernel ကိုရေးတဲ့ ကုတ်တွေလဲတကယ့်ကိုများလှပါတယ်၊ Kernel ရဲ့ အဓီက တာဝန်ကတော့ Hardware နဲ့ Softwareတို့ကြားမှာ နှစ်ဖက်ညွန်ကြားချက်တွေကို နာလည်အောင် လုပ်ကိုင်ပေးဖို့ပါပဲ၊Software တစ်ခုက ဘယ်လို အလုပ်မျိုးကိုမဆို Hardware ကို လုပ်စေချင်တဲ့အခါကျရင် Hardware ကို တိုက်ရိုက် အမိန့်မပေးပဲနဲ့ Kernel ကိုညွန်ကြားချက် အရင်လှမ်းပို့ပါတယ်၊ ဒီနေရာမှာ အလုပ်ဆိုတာက ဖုန်းကလုပ်နိုင်တဲ့ အလုပ်အားလုံးကိုညွန်းပါတယ်၊ ဖုန်း Screenအလင်းရောင်ချိန်တာတို့၊ အသံ အနိမ်း အမြင့် ချိန်တာတို့၊ Raido ကိုချိတ်ဆက်ပီး ဖုန်းခေါ်ဆိုတာတို့၊ ဖုန်း မျက်နှာပြင်မှာ ပုံဆွဲတာတို့စသဖြင့် အလုပ် မှန်သမျှကို Software က လုပ်လိုတဲ့အခါကျရင် Hardwareကိုတိုက်ရိုက် မခိုင်းပဲ Kernel ကိုလှမ်းခိုင်းလိုက်ပါတယ်၊ အဲ့ဒီ့ အခါမှာKernal က တဆင့် Hardware ကို လုပ်မယ့်အလုပ်ကိုညွန်ကြားပါတယ်၊ ဥပမာကျွန်တော်တို့ ဖုန်း မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာ က ကင်မရာ (Camera) ရိုက်တဲ့ခလုပ်မှာ ခလစ်တစ်ချက်နှိပ်ပီး ဓါတ်ပုံရိုက်တယ်ဆိုပါစို့ ၊ခလုပ်ကိုနှီပ်လိုက်တာနဲ့ကို software က Event တစ်ခုကိုနားထောင်လို့ရမယ်ရတဲ့ Event ဖြစ်ပေါ်တဲ့နေရာကို driver ကတဆင့် Kernel ကို ပို့မယ်၊ kernelကလဲ ရလာတဲ့အချက်နဲ့ ပက်သက်တဲ့ command ကို Camera hardwareကိုလှမ်းပို့မယ်၊ Camera Hardware က ဓါတ်ပုံကို ရိုက်ပေးမယ်၊ ဒီလို တစ်ခုကSoftware က Input လုပ်လိုက်တာကို Kernel က ယူပီး Output တစ်ခုအဖြစ်Hardware ကိုပြန်ပေးပါတယ်၊အကယ်၍ Kernel သာမရှိခဲ့ရင်တော့ Developers တွေက အလုပ်တစ်ခုစီအတွက်အလွန့်အလွန်များပြားလှတဲ့ machine Code တွေကို ရေးပီး Hardware ကိုခိုင်းစေရမှာဖြစ်ပါတယ်၊ Kernel က ကြားခံ ပေးထားတဲ့အတွက် ApplicationDevelopers တွေအနေနဲ့ Android System API's တွေကနေ တစ်ဆင့် Kernel ဆီကိုResquest တွေအလွယ်တစ်ကူပို့နိုင်ပီး Kernel နဲ့ ချိတ်ဆက် အလုပ်လုပ်ဖို့သာDevelop လုပ်ရမှာဖြစ်သလို Hardware Developers တွေကလဲ သူတို့ Developလုပ်တဲ့ Hardware ကို Kernel နဲ့ ဆက်သွယ် အသုံးပြုနိုင်အောင်သာ Developလုပ်ပေးစရာလို့ပါတယ်၊CWM ဆိုတာဘာလဲCWM ဆိုတာကတော့ ClockWorkMod ကိုဆိုလိုပါတယ်၊ CWM ကို Android သုံး ဖုန်းနဲ့ Tablet တွေ Recovery လုပ်ဖို့သုံးပါတယ်၊ ဒီလို CWM သုံးပီး recoverလုပ်တာကိုပဲ CWM recovery လို့ခေါ်ပါတယ်၊ CWM recovery လုပ်ခြင်းအားဖြင့်Stock Recovery နဲ့ မလုပ်နိုင်တဲ့ Data ပြန်လည်သိုလှောင်ခြင်း root accessရယူခြင်း အသုံးပြုတဲ့ ဖုန်းထဲက data တွေကို Backup လုပ်ခြင်း Custom ROMထည့်သွင်း အသုံးပြုခြင်း Kernel တပ်ဆင်ခြင်း စသဖြင့်အလုပ်တွေအများကြီးကိုလုပ်သွားနိုင်ပါတယ်၊ Android အခြေခံ အဆင့် ကိုနားမလည်သေးသူတွေအတွက် ClockWorkMod ကိုသုံးပီး Recovery လုပ်ရင် အခက်အခဲတွေ့နိုင်သလို CWM recovery က အစွမ်းကိုလဲ သဘောပေါက်ဖို့ခက်ခဲနေပါအုံးမယ်၊Android Devices တွေအားလုံး recovery console ကို ဖုန်း အတွင်းပိုင်းmemory ထဲ ထည်ပီး ကုမ္မဏီတွေက ထုတ်လုပ်ရောင်းချပါတယ်၊ recover console ကနေBoot တက်နိုင်ပါတယ်၊ အကယ်၍ မလိုလားအပ်တဲ့ ပြသနာတွေ တက်လာပီးဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ Factory Reset သုံးပီး Recover လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါမှမဟုတ်zip ဖိုင်နဲ့ လာတဲ့ official ROM ကို Update လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုအချက်လောက်သာလျှင်လုပ်နိုင်တာပါ Custom Recovery ကတော့ သူမတူတဲ့အလုပ်မျိုးကိုလုပ်နိုင်ပါတယ်၊ Custom Recovery ကတော့ Stock Recoveryလိုမဟုတ်ပဲ Stock Recovery လုပ်နိုင်သမျှကိုလုပ်နိုင်တဲ့ အပြင် ကိုယ်ပိုင် Android ကို စိတ်ကြိုက် ထိန်းချုပ် နိုင်အောင် အဆင့်မြင့်တဲ့Options တွေပါလာပါတယ်၊ Custom Recovery ကို သုံးရင် တရားဝင်ကော တရားမ၀င်ROMs တွေကိုပါ Install လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ အခြား Application Updateလုပ်ခြင်း Themes ပြောင်းခြင်း Kernel ပြောင်းလဲခြင်း Zip ဖိုင်အသုံးပြုခြင်း User Data အပါအ၀င် ဖုန်း Partition တွေအားလုံးကိုဖြတ်နိုင်ခြင်း SD cards Partition ခွဲခြင်း Dalvik Cacheများဖြတ်ပစ်ခြင်း Permission များပြောင်းလဲခင်း resotre နဲ့ Backup မှာစိတ်ကြိုက် အစိတ်အပိုင်းတွေကို ရွေးချယ်နိုင်ခြင်း နဲ့ အခြား အခြား သောအလုပ်တွေအများကြီးကို စိတ်ကြိုက်လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ClockWorkMod recovery ကို Koushik Dutta က Develop လုပ်ခဲ့ပါတယ်၊ AndroidROM Manager ကို Develop လုပ်တဲ့သူပါပဲ၊ သူ့ရဲ့ Hacking away at Androiddevices ဆိုတဲ့ Blog နဲ့ Twitter မှာ သူ့ကို ရှာတွေ့နိုင်ပါတယ်၊Firmware နဲ့ ပက်သက်သမျှFirmware ဆိုတာက ROM (read only memory) ထဲကိုထည့်ရေးထားတဲ့ Softwareprogram ကိုဆိုလိုပါတယ်၊ Window computerတွေမှာသုံးတဲ့ window7 installလုပ်သ လိုပါပဲ၊ ဖုန်းအတွက် Firmware Install လုပ်တယ်ဆိုရင်တော့Froyo,Gingerbread,HoneyCamb,ICS,Jelly Bean,Kitkat တို့လို AndroidVersion တွေကို Phone မှာ Install လုပ်ခြင်းပါပဲ၊ ဖုန်းတိုင်းမှာ မတူညီတဲ့Firmware နဲ့ installation Tool တွေရှိပါတယ်၊ ဒါ့ကြောင့် ကြိုက်တဲ့ဖုန်းမှာ ကြိုက်တဲ့ firmware ကို သုံးနိုင်မှာတော့ မဟုတ်ပါဘူး၊တစ်ခုတော့ရှိတယ်၊ ROM ဆိုတာက မူရင်း အဓိပါယ် Read-Only-Memoryကိုဆိုလိုပါတယ်၊ ဒီတော့ read only ဖတ်လို့ပဲရမယ် ရေးလို့မရဘူးဆိုတဲ့သဘောပေါ့၊ ဒါဆိုရင် ဘယ်လိုလုပ်ပီး ROM ထဲက Firmware ကို Updateလုပ်နိုင်မှာလဲလို့တွေးစရာပါ၊ သဘောတရားအရ တော့ ROM ထဲမှာ Firmwareရှိတယ်ပေါ့ ၊ နောက်ပိုင်းမှာတော့ Developer တွေက ROM ရဲ့ အပြင်မှာFirmware ကိုထည့်ရေးကုန်ကြပါတယ်၊ ဖုန်းရဲ့ Firmware ကို ROM လို့လဲခေါ်တယ်၊အကြောင်းကတော့ သီအိုသီသဘောမှာ Firmware က ROM ထဲမှာရှိတယ်၊ ROM ဆိုတာ ReadOnly Menory, ရှေ့က ထုတ်ခဲ့တဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့ Firmware က ROMထဲမှာရှိတယ်ဆိုတာမှန်ပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် ယနေ့ အသုံးပြုနေတဲ့ ဖုန်းတွေမှာတော့Firmware ကို ROM မထည့်တော့ပါဘူး၊ Firmware ကို ဖုန်းရဲ့ internal flashmeonry ထဲမှာ ထည့်ထားတယ်၊၊ internal flash meonry က Read Only မဟုတ်ဘူး၊ဒါ့ကြောင့် firmware အသစ်တစ်ခုကို flash လုပ်လို့ရတာပေါ့၊Flashing ဆိုတာဘာလဲFlashing လုပ်တယ်ဆိုတာက Eloctronic Device ဖြစ်တဲ့ Phone ထဲကို firmwareထည့်သွင်းတာကိုဆိုလိုပါတယ်၊ Flashing လုပ်ခြင်းက ROM ထဲမှာရှိတဲ့ Dataတွေကို ပြန်ရေးခြင်းပါပဲ၊ Android ဖုန်းမှာ Custom ROMs ကို Stock ROMsအစား Flashing လုပ်ပီးတော့ ဖုန်းထုတ်တဲ့ ကုမ္မဏီက ထည့်သွင်းပေးလိုက်တဲ့Functions တွေကို ပြောင်းလဲ ပီး ပိုမိုကောင်းမွန်တဲ့ Unlimited၀င်ဆောင်မှူကို ရရှိနိုင်ပါတယ်၊Rooting ဆိုတာဘာလဲAndroid System ရဲ့ Hardware Layer အပေါ်မှာရှိတဲ့ Linux Kernel ကိုလိုသလို ထိန်းချုပ်လို့ရနိုင်မယ့် အခွင့်အရေးရချင်လို့ Root accessလုပ်ကြပါတယ်၊ ဒီအခွင့်အရေးရယူနိုင်ခြင်းကိုပဲ Root Accessရတယ်လို့ခေါ်ပါတယ်၊ Root Access ရသွားရင် Android File System ကိုစိတ်ကြိုက် ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်၊ Android File System ထဲမှာ အဓိက ပါဝင်တဲ့အလွှာ (Partitions) ၆ ခု ကိုလိုသလို အသုံးချနိုင်ရင် Booting နဲ့ ပက်သက်တဲ့Process တွေအားလုံးကိုထိန်းချုပ်နိုင် သလို File System ထဲက တန်ဖိုးတွေနဲ့ထိန်းချုပ်မှူတွေကိုလဲ လိုသလို ပြုပြင်နိုင်ပါပီ၊ ဒါတင်မကပါဘူးကျွန်တော်တို့ စိတ်ကြိုက် SSH (Secure Share protocol) (သို့) HTTP (HyperText Transfer Protocol) DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)(သို့) DNS(Domain Name Server) နဲ့ Proxy Servers တွေကို လဲအသုံးပြုနိုင်ပါပီ၊ Android System ရဲ့ လုပ်ဆောင်မူတွေထဲကရပ်ချင်သမျှလုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုလဲ ရပ်ထားနိုင်တဲ့ အပြင် Arbitrarycommands တွေလဲ အသုံးပြုနိုင်သွားပါတယ်၊ အခြားအခြား အခြား သောအချက်တွေအများ အများကြီးကိုလဲလုပ်နိုင်ပါသေးတယ်၊ ဒီအချက်တွေက Rootလုပ်ရခြင်းရဲ့ ရည်ရွယ်ချက်ပါ၊ ဒါကိုပဲ Rooting လုပ်တယ်လဲခေါ်ပါတယ်ထုတ်လုပ်သူ တွေက သူတို့ရဲ့ Device တွေကိုရောင်းချတဲ့အခါ Softwarerestrictions တွေပါလာပါတယ်၊ ဒီလို Software Restrictions တွေပါလာရတဲ့အကြောင်း အမျိုးမျိုးရှိပါတယ်၊ တစ်ချို့ကုမ္မဏီတွေကတော့ သူတို့ပစ္စည်းကိုအသုံးပြုတဲ့ သူတွေကို ကာကွယ်ပေးဖို့ ဆိုပီး Restrictions ထည့်ပါတယ်၊ဘယ်လို အကြောင်းကြောင့်ပဲဖြစ်ဖြစ် ကန့်သက်ချက်တွေပါဝင်နေခြင်းဟာ Androidဖုန်း (သို့) Tablet ကို သုံးတဲ့သူ လိုအပ်တဲ့ပုံစံအတိုင်းပြောင်းလဲဖို့ကြိုးစားတဲ့ အခါ မျိုး (သို့) အဆင့်မြင့်တဲ့ပြင်ဆင်မှူပြုလုပ်ခြင်းမျိုး ပြုလုပ်တဲ့အခါမျိုးမှာ ကာစီနေတတ်ပါတယ်၊ ဒီလိုအကာ အစီးကို ကျော်ဖြတ်ပီး စိတ်ကြိုက်ထိန်းချုပ်နိုင်အောင် Root accessရဖို့ကြိုးစားကြပါတယ်၊Rooting လုပ်ခြင်းက Android သုံး ပစ္စည်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္မဏီတွေကကန့်သတ်ထားတဲ့ ကန့်သက်ချက်တွေကို ချိုးဖြတ်ပီး software ကို အကန့်အသက်မရှိအသုံးပြုခြင်းပါပဲ၊ ဒီလို Rooting လုပ်ခြင်းအားဖြင့် ကျွန်တော်တို့ကိုကန့်သက်ထားတဲ့ Android ပစ္စည်း ရဲ့ အစိတ်အပိုင်းမှာ ရေးချင်တာရေးနိုင်သလိုပြုပြင်လိုသမျှကို ပြုပြင်သွားနိုင်ပါတယ်၊Custom ROM နဲ့ Stock ROM တို့ ဘာကွာလဲStock ROM နဲ့ Custom ROM ဆိုပီးနှစ်မျိုးရှိမယ်၊ Stock ROM ကဖုန်းဝယ်တုန်းက ပါလာတဲ့ Phone Operation System. Stock ROM မှာ SoftwareRestriction တွေထည့်သွင်းထားတဲ့ အတွက် စိတ်ကြိုက်အသုံးပြုခွင့် မရတဲ့Operation System ဖြစ်နေပါတယ်၊ Custom ROM ဆိုတာကတော့ OS Versionတစ်ခုပါပဲ၊ Custom ROM ထဲမှာလဲ Stock ROM တွေလိုပဲ Android Deviceတစ်ခုလုံးကို အလုပ်လုပ်စေတဲ့ Kernel ပါတယ်၊System Applications တွေပါမယ်၊Services တွေပါမယ်၊ တစ်ခုပဲကွဲသွားတာက စိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ROMဖြစ်ခြင်းနဲ့ Software Restriction တွေမပါခြင်းပါပဲ၊ ဒီတော့ Customဆိုတဲ့စကားလုံးက ကဘာကိုရည်ညွန်းလဲ၊ Android က Open Source ဖြစ်တဲ့ အတွက်Developers တွေက Stock ROMS တွေ အခမဲ့ယူလို့ရတယ်၊ ပီးရင် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်လို့ရတယ် ဖျက်ပစ်လိုရာ ဖြတ်ထုတ်နိုင်တယ်၊ထပ်ထည့်လိုတာထပ်ထည့်နိုင်တယ်၊ အရည်အချင်းရှိရင် ရှိသလောက် စိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ပြောင်းလဲပီး စိတ်ကြိုက် ROM ကို တည်ဆောက်ယူနိုင်တယ်၊ ဒီလိုစိတ်ကြိုက်တည်ဆောက်ထားတဲ့ ROM ကိုပဲ Custom ROM လို့ခေါ်တာပါ၊ADB ဆိုတာဘာလဲADB ရဲ့ မူရင်းစာလုံးကတော့ Android Debug Bridge ပါ၊ သူ နာမည်အတိုင်းပါပဲသူက ဖုန်းကို ပြုပြင်ဖို့ အတွက် ကွန်ပြူတာနဲ့ ဖုန်းကြားချိတ်ဆက် နိုင်တဲ့တံတားတစ်စင်းပါ၊ Android Phone က Linux Kernel ကို အခြေခံထားပါတယ်၊ ဒီတော့computer adb server ကိုအသုံးပြုပြီး ကွန်ပြူတာကနေ ဖုန်း ရဲ့ adb Clientကို Linux commands တွေလှမ်းပို့နိုင်ပါတယ်၊ ဒီလိုလုပ်ပီး commands တွေကိုအလုပ်လုပ်စေနိုင်ပါတယ်၊ ဖုန်း အလုပ်လုပ်ပုံတွေမမှန်တော့တဲ့ အခါမျိုးမှာဒီနည်းက တော့ အမှားရှာပီး ပြင်ဆင်ဖို့ တကယ့်ကို အသုံးဝင်တဲ့နည်းပါ၊ဒီနည်းအတိုင်း ADB Server ဖြစ်တဲ့ Computer ကနေ ADB Client ဖြစ်တဲ့ဖုန်းကို Linux Commands တွေပို့ပီး အလုပ်မလုပ်ဖူးသေးရင်တော့ မိတ်ဆွေ ADBရဲ့ အသုံးဝင် မှူကိုခံစားဖူးအုံး မှာ မဟုတ်သေးပါဘူး၊Baseband ဆိုတာဘာလဲBaseband ဆိုတာကတော့ ဖုန်းတွေမှာသုံးတဲ့ Raido ကိုဆိုလိုပါတယ်၊ ဖုန်းVersion နဲ့ ထုတ်လုပ်တဲ့ ကုမ္မဏီ အလိုက် Raido Version တွေလဲကွာပါတယ်၊Raido File တွေကို Recovery tools တွေကနေ Flash လုပ်နိုင်သလို ADB/ODINတို့ကလဲ Flash လုပ်နိုင်ပါတယ်၊ Raido (သို့) Modem နဲ့ ROM Version တို့ကိုက်ညီမှူမရှိရင် တော့ MMS, 3G data, VM နဲ့ Network ပြသနာတတ်နိုင်ပါတယ်၊ ဒါကြောင့် အသုံးပြု နေတဲ့ ROM နဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ Radio (သို့)Modem ကို ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လိုသလို ဖုန်းနဲ့ ကိုက်ညီတဲ့ network နဲ့bandwidth တို့ကိုလဲ ရွေးချယ်နိုင်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်၊Raido Firmware က Network ချိတ်ဆက် ဆက်သွယ်ရေးအတွက် low-level functionsတွေကိုသုံးပီး Wi-Fi နဲ့ GPS တို့ ချိတ်ဆက်အသုံးပြုနိုင်စေပါတယ်၊ အကယ်၍ဆက်သွယ်ရေး နဲ့ ပက်သက်တဲ့ ပြသနာမျိုး Android Device မှာတွေ့ကြုံနေရပီဆိုရင်တော့ Radio Firmware ကို Update လုပ်ဖို့လိုပါပီ၊Radio Firmware ကို Update လုပ်ခြင်းက Range နဲ့ လုပ်ဆောင်မှူတွေကိုပိုမိုကောင်းမွန်လာ မှာ ဖြစ်သလို Bettery အသုံးပြုမှူကိုလဲရှော့ချပေးနိုင်ပါတယ်၊ဖုန်းထဲမှာ Baseband Radio Processor Chipsets တွေပါဝင်ပါတယ်၊ ဒီ Chipsetsတွေကို ထိန်းချုပ်ဖို့အတွက် Software မျိုးစုံကိုလဲ ဖုန်းထုတ်လုပ်တဲ့ကုမ္မဏီတွေက Develop လုပ်ကြပါတယ်၊။။
BLOG Blog Lesson IT ဗဟုသုတ ဗဟုတုတဆိုင်ရာ ဗဟုသုတ
အောင်မြင်သော Blogger အဖြစ်သို့... (Aung Ko Htet.mp3)
Aung Ko Htet at 12:20:00 AM 0
မြန်မာနိုင်ငံမှာ Blogger ဆိုတာ ဘာမှန်းမသိကြသေးတဲ့လူတွေတော်တော်များပါတယ်။ များသောအားဖြင့် Blogger ဆိုလိုက်တာနဲ့ နည်းပညာ အကြောင်းနားလည်တဲ့ လူကိုပဲ Blogger လို့ခေါ်ကြတယ်လို့ ထင်ကြပါတယ်။ ပြီးတော့ Blog ရေးနေရတာဟာပိုက်ဆံကုန်တာပဲ အဖတ်တင်ပြီး ဘာမှမရဘူးလို့ ထင်နေကြတဲ့ လူတွေအတွက်လည်း Blog ရေးခြင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး ဘယ်လို အကျိုးကျေးဇူးတွေရရှိတယ်ဆိုတာကို ပခုက္ကူ ဘားကမ့်မှာ ကျွန်တော် ဆွေးနွေးထားတဲ့ " အောင်မြင်သော Blogger အဖြစ်သို့ " ဆိုတဲ့ ခေါင်းစဉ်နဲ့ ဆွေးနွေးထားတဲ့ အသံဖိုင်လေးကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
ဒီဆွေးနွေးပွဲလေးမှာ ဘယ်လို Blog တွေရေးသင့်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်း ၊ မိမိ Blog က မိမိရဲ့ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းအတွက် ဘယ်လို အထောက်အကူပြုစေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတွေကို တတ်နိုင်သလောက် ပြည့်ပြည့်စုံစုံ ဆွေးနွေးပေးထားပါတယ်။
Blogger အကြောင်းကို သိရှိလိုသူများအနေနဲ့ နားထောင်သင့်တဲ့ အသံဖိုင်တစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။
အောက်က Link ကနေ တိုက်ရိုက်နားထောင်နိုင်သလို Download ပြုလုပ်ပြီးလည်း နားထောင်နိုင်ပါတယ်။
Facebook : www.facebook.com/bloggeraungkohtet
Email : aungkohtet.htet82@gmail.com
Website : www.mmitknowledge.com , www.myanmarmobileapp.com
Than Toe Aung at 1:09:00 PM 0
မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်းနှင့် Coca Cola Myanmar တို့ပူးပေါင်းကာ အခမဲ့ဖုန်းငွေဖြည့်ပေးသည့် အစီအစဉ်တစ်ရပ်ကို ဆောင်ရွက်လိုက်ကြောင်း သိရသည်။
တစ်ရက်လျှင် ဖုန်းနံပါတ်တစ်ခုမှ ငါးခုအထိ အများဆုံးပေးပို့နိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ဖုန်းဘီလ်များမှာ ၂၀၀ ကျပ်မှ ၁၀ သိန်းအထိ ပါမည်ဖြစ်ကြောင်းသိရသည်။ တန်ဖိုး အမြင့်ဆုံး ၁၀ သိန်းကျပ်ရရှိသူ၏ ဖုန်းငွေဖြည့်မှုမှာ လေးနှစ်အထိ သက်တမ်းခံစားခွင့် ရှိမည်ဖြစ်ကြောင်း၊ စုစုပေါင်း ဆုမဲပေါင်း ၁၅ သန်းကျော် ပါဝင်မည်ဖြစ်ကြောင်း သိရသည်။ ဆုမဲများနှင့်ပတ်သက်၍ MPT ဖုန်းဖြင့် ၁၀၆ သို့ ခေါ်ဆိုမေးမြန်းနိုင်ရန် စီစဉ်ထားကြောင်း သိရသည်။
Than Toe Aung at 12:28:00 PM 0